Nielsen Kuenzanisa Maapuro nemaOranges, Podcasting kuBlogging | Martech Zone
Nielsen Kuenzanisa Maapuro nemaOranges, Podcasting kuBlogging
China, July 13, 2006 Chipiri, July 4, 2017 Douglas Karr
Sezvo neyangu yekupinda yapfuura pane iyo 'machubhu' kuzadza paInternet, zvinogara zvichindishamisa ini apo vanhu vanozviti nyanzvi vanosimuka votaura chimwe chinhu chakapusa. Nielsen ichangobva kuburitsa fananidzo yevashandisi vePodcast kuBlogging. Uku kuenzanisa kunoshamisa. Vashandisi vePodcast vatengi, uye mabloggi vatengesi. Izvo zvine hukama sei munyika? Nekuti vese vanoshandisa internet? Mumwe muenzaniso wekuti mainstream midhiya haina kana poindi…
Pane yakafanana tsamba, wakataura nezve Seti blog mushure mekukurukurirana kweABC's (Audit Bureau of Circulation) mitemo inogara ichichinja iyo inoita kuti mapepanhau awane nhamba dziri nani apo kutenderera kuri kuenderera donha.
Tags: odhita Bureau yekutendererabloggerskuderera kwepepanhaupodcast kutsikisavashandisi vepodcastkutsikisaseth godin
Inononoka Internet Kubatana? Ndiwo machubhu anozadza!
Mar 21, 2007 pa 4: 40 AM
Ini ndinofunga poindi yekujekeswa inodikanwa maererano nemaapuro-ako-maorenji kutaura. Hongu, apo vateereri kune podcast vatengi, uye vanyori yemablog ari vagadziri, hachisi chokwadi zvakare kuti iyo Creators epodcast ndivo vagadziri? Kana pfungwa iyi ichishanda (uye ini ndinofunga zviri zvechokwadi) saka Kuenzanisa kweNielsen kunoenderana nemhando dzakasiyana dzevagadziri, kana mhando dzakasiyana dzevatengi dzinoita senge dzakakodzera. Ini ndinobvuma kuti ini handina kuona kutsvagurudza kwaNielsen kwawakanongedzera, asi ini ndinofungidzira kuti kwavo kuenzanisa hakuna kubviswa sezvaunofunga. Ehe, midhiya akakurisa kazhinji haawane kana zvasvika kune zvinounzwa neWebhu, asi ini ndinofunga panguva ino kushoropodza kwako kwakanyanya.
Mar 21, 2007 pa 6: 52 AM
Iko kune chinongedzo kune iyo Nielsen chinyorwa mune iyo posvo. Heino pfupiso.
Ndakamira nemaapuro nemaorenji… fananidzo haina basa. Ini ndinotenda iwe unomira nekupindura, zvakadaro! Ndine chokwadi chekuti iwe uchawana toni inotonyanya kuenzanisa pane yangu saiti kupfuura Nielsen. 🙂